အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 မွန်း Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
မွန်းတက်တူးထိုးကြောင့်ထိုသို့ပြုကိုယ်စားပြုအရာကို inking တွေထဲကလူကြိုက်များအမျိုးအစားဖြစ်လာသည်။ အဲဒါကိုကောငျးကငျအင်အားကြီးကျော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးလည်းနက္ခတ္တဗေဒ, ကသမိုင်းနှင့်သိပ္ပံနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြကြောင်းယုံကြည်သူမှင်လူတွေအများအပြား။ အဆိုပါ #moon တက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သူတွေကိုအထက်ပါအဓိပ္ပါယ်များစိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ပါ။ လရှိကြောင်းအဓိပ္ပါယ်များအရေအတွက်ကထူးခြားသောစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဓိပ္ပါယ်များပေးရသည်အခြားပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ လ၏အဓိပ္ပါယ်များအချို့သည်မှော်ရှိနိုင်ပါသည်။ မှော်လုပ်နိုင်တဲ့မှင်၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုမဆိုစိတျအပိုငျးအပျေါ #tattoo ယုံကြည်သူများသည်။ လ၏သိသိသဘောသဘာဝသူတို့က lunacy နှင့်စိတ္တဇကိုကိုယ်စားပြုသူကပြောပါတယ်သောသူဖြစ်ကြ၏နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာလူတွေမှင်ကြောင့်စေသည်တစ်ခုခုပါပဲ။
မွန်းတက်တူးထိုး Self-စကားရပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, သေးတဲ့လတက်တူးသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာမထိုးဖောက်ဖို့ရှေးခယျြသူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရုံးသို့သွားနှင့်ဆိုင်သို့မဟုတ်လတက်တူးထိုးမှာအလုပ်လုပ်လက်သမားနှင့်အတူကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းဖယ်ထားသင့်၏ နန်းတော်။ မှတဆင့်
ကံကောင်းတာက, လတက်တူးနှင့် Pierce အခြားမည်သည့်အချိန်ကထက်ပိုပြီးလုံခြုံဖြစ်ကြသေးသင်တစ်ဦးသည်ဝမ်းမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့လှည့်မီ, ကသင့်ရဲ့အလုပ်အမှုကိုပြုရမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်လက်သမားတင်းကျပ်ကောင်းစွာနည်းစနစ်ဖြစ်ခြင်းမှစွဲကိုင်ဖို့အပျေါမှီခိုနေကြသည်။ မှတဆင့်
ကို Creative မွန်း Tattoo
နည်းစနစ်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ကောင်းစွာယူပြီးအသုံးပြုပုံလတက်တူးထိုးအထူးကုနှင့်ခန္ဓာကိုယ် piercers ရောဂါအကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မကူးစက်မှုများနှင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏နယ်ပယ်မှမိမိတို့နှင့်၎င်းတို့၏ clients များကာကှယျ။ မှတဆင့်
ဒါကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလတက်တူးထိုးရှိသည်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နှစ်တွေကျနော်တို့ကသူတို့အလောင်းတွေကိုအလှဆင်ဖို့ဒီလတက်တူးထိုး၏အသုံးချနေလူရာပေါင်းများစွာမြင်ကြပြီ။ လူတိုင်းလကိုတက်တူးထိုးမြင်လျှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်အမွငျရှိပါတယျ။ မှတဆင့်
ကြယ်ပွင့်နဲ့ Moon Tattoo
သင်တစ်ဦးအေးမြအကြမ်းဖျင်းတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တာနဲ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလတက်တူးထိုးဘို့ဘေးဖယ်တစ်ခုခု setting ခဲ့ကြရတယ်။ လက်ရှိတွင်ကစက္ကူကနေအရေပြားကိုအနုပညာကသင်၏အလုပ်ဖလှယ်မည်သူတစ်ဦးတရားဝင်စတူဒီယိုနှင့်လက်သမားနေရာချထားရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ မှတဆင့်
တချို့ကပြည်နယ်နှင့်ခရိုင်လတက်တူးစတူဒီယိုနှင့်လက်သမားကိုထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ လတက်တူးထိုးဟာ့ဒ်ဝဲဆည်းပူးဖို့စျေးပေါပြီးရိုးရှင်းပြီးကတည်းကမည်သည့်ကိစ္စတွင်အလွန်မှန်မှန်, လတက်တူး, မီးဖိုချောင်နှင့် carports ၌ပြစ်မှားမိနေကြသည်။ မှတဆင့်
unsterile စက်နှင့် unpracticed အထူးကုနေတဲ့လကိုတက်တူးထိုးရယူခြင်းသင်ထားနိုင်ပြီး, လက်သမား, အန္တရာယ်မှာအစဉ်အမြဲတိကျတဲ့ဏုသက်ရှိအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဥပမာ, အသည်းရောင်အသားဝါဘီသို့မဟုတ်အသားအရေညစ်ညမ်းဘို့, တွန်းလှန်ဝေဒနာတွေထိခိုက်။ မှတဆင့်
ကျနော်တို့ကသူတို့အလုပ်ကိုအမှုကိုပြုရလတက်တူးထိုးရှာဖွေနေသူတိုက်တွန်းပါသည်။ စစ်မှန်သောအပြာရုံး Locate နှင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်တောင်းဆိုရန် - ဆိုင်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောနှင့်သန့်ရှင်းဖြစ်သင့်၏။ လုံခြုံရေးနည်းစနစ် ပတ်သက်. အထူးကုနှင့်အတူစကားပွောအကြောင်းကိုကျိုးနွံဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါ။ မှတဆင့်
မွန်း Tattoos ၏စူပါ Designs
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်, လူဂုဏ်အသရေနှင့်လတက်တူးသွားအသုံးပွုနိုငျသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကိုင်စွဲဖို့လာကြပြီ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဤကဲ့သို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့လတက်တူးထိုးရှိခြင်းခံစားရပုံကိုဥပမာယူပါ? ဒါဟာနှစ်ပေါင်းတစ်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာတော်မူကြောင်းကိုတဦးတည်းလတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာကျနော်တို့ပစ္စုပ္ပန်, အတိတ်နှင့်ပင်အနာဂတ်ကာလကိုသတိရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီအလုပ်လုပ်တယ်အံ့သြဖွယ်အနုပညာသဘောပေါက်နားလည်လာကြပါပြီ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဒါကြောင့်ဝီရိယစိုက်သင်တို့အပေါ်မှာမှင်အခါတစ်ဦးလတက်တူးထိုး၏ဂုဏ်အသရေသာတန်ဖိုးထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျလတက်တူးတွေအများကြီးအရေးပါလိုအပ်ရှိရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း။ သငျသညျဖြစ်စေကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာကထိုသို့ပုန်းရှောင်သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ကြယ်ပွင့်နဲ့ Moon တက်တူး
သင်လတက်တူးထိုးရမတိုင်မီလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးအရာကဘာလဲ? သင်လိုတက်တူးထိုးအမျိုးအစားကိုသိသင့်ပြီးတော့သင်တက်တူးအကြောင်းပြောနေတာဘာနားလည်သင့်တယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ဖတ်ပါနှင့်အထူးသဖြင့်တက်တူးထိုးအကြောင်းကိုအထိခိုက်မခံမေးခွန်းများကိုမေးရန်တတ်နိုင်ကြသည်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့လတက်တူးထိုးရရန်အဘို့အ, ကပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပိုပြီးမွန်း Tattoos များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တက်တူးထိုးစိတ်ကူးများစိန်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးFeather Tattooရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးKoi ငါးတက်တူးrip တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးမြှားတက်တူးခြေကျင်း Tattoosလက်တက်တူးဆင်တက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosလူမျိုးစုတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းချယ်ရီပွင့်တက်တူးကြောင်တက်တူးလတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးအစ်မတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးနေရောင်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူးတက်တူးထချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးချစ်စရာတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးငှက်တက်တူးလက်တက်တူးပန်းချီတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးခြေလျင်တက်တူးဂီတတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးဟင်္တက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးမျက်စိတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးနှလုံး Tattoosပန်းပွင့်တက်တူးစုံတွဲတက်တူး